Home Wararka Gudaha CCW oo ugu baaqay hay’adaha QM in ay gurmad degdeg ah u...
CCW oo ugu baaqay hay’adaha QM in ay gurmad degdeg ah u fidiyaan caruurta nafaqo darrada hayso.
Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u qaabilsan Arrimaha Gurmadka Abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa maanta booqday Ibitaalka Banaadir oo ay ku jiraan dadka kusoo barakacay magaalada Muqdisho, kuwaas oo wajahay xaalad nafaqo darro ah.
Saameenta ka dhalatay Abaarta ka jirta Soomaaliya ayaa sabab u noqotay in kumaanan Caruur Nafaqo darradan la soo daristay taas oo ka dhalatay xaaladda abaaraha ka jira dalka, ayaa carruurtan loo keenay Isbitaallada Magaalada Muqdisho, iyada oo badankooda laga keenay Gobollada dalka.
Wafdiga Ergayga ayaa “Agaasimaha Isbitaalka Banaadir Dr. Fartuun Shariif Maxamed uga war bixisay baahida xooggan ee ka jirta Isbitaalka ee la xariirta la tacaalidda carruurta ay saamaysay nafaqo darrada ka dhalatay abaaraha ka jira dalka, waxay ay sidoo kale Agaasime Fartuun sheegtey in aad loogu baahan yahay in si deg deg ah arrintaan wax looga qabto.” Ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Xafiiska Ergayga
Warsaxaafadeedka ka soo baxay Booqashada Ergayga ayaa lagu sii yiri “Dadka abaarta ka soo barakacay ayaa ah kuwo nolol ahaan aad u hooseeya oo ay duruuf xooggani ka muuqato, keliya maahan nafaqo darro waxa haya ubadkaasi balse waxaa u wehliya xannuunada faafa, sida jadeecada.”
Dhanka kale Agaasime Isbitaalka Banaadir ayaa sheegtay in ay hadda Isbitaalka ku sugan yihiin 220 carruur ah oo ay soo ridatay xaaladda nafaqo darrada ee dalka ka jirta, ayada oo dhanka kale sheegtay in ay buuxsameen sariirihii loogu tala galay in la jiifiyo bukaannada waajahaya xaaladda nafaqo darrada ah. Ayaa lagu sii yiri qoraalka ka soo baxay Xafiiska Ergayga.
Ugu danbayn, Ergeyga ayaa ugu baaqay hay’addaha Qaramada Midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka bani’aadanimo ka shaqeeya in ay gurmad degdeg ah u fidiyaan caruurta nafaqo darradu hayso iyo waalidiintooda abaartu saamaysay.
Soomaaliya ayaa waxaa ka jirta Abaar aad u daran taas oo saameesay dadka iyo duunyada, deegaannada qaar ayaa laga soo warinayaa in dadka ku sugan ay la’yihiin waxa ay cabaan halka kuwa kale ay ka baro kaceen deegannadii ay degnaayeen.
Previous articleGuddoomiyaha Golaha Shacabka BFS oo kulan la qaatay Safiirka Jaamacadda carabta u fadhiya Soomaaliya.
Next articleCiidanka dowladda oo sheegay in howlgal qorsheysan ay ku dileen Sarkaal Shabaab ka tirsan